Archive du 17-juin-2022
Lesona goavana amin’ny politika tsy misy ohatran’izao iainantsika izao. Na ireo mpikatroka ara-politika na mpanohitra io na mpitondra,
Trangana fakana an-keriny Fitarainana 10 no voarain’ny polisy tao anatin’ny tapa-bolana
Maro ireo trangana fakàna an-keriny hita sy nanaovan’ny « Cellule Opérationnelle » fanadihadiana nanomboka ny faramparan’ny volana mey no mankàty.
Fambolena sy fiompiana Resy lahatra amin’ny paikadin-dRavalo ihany Rajoelina
Nisokatra omaly 16 jona ny Fikaonandoham-pirenena momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizakan-tena ara-tsakafo.
Nosy Be Naiditra am-ponja i Ninie Donia
Mafampana ny toe-draharaha ao Nosy Be. Naiditra am-ponja vonjimaika i Ninie Donia fantatry ny maro amin’ny maha mpisehatra ara-politika ankoatra ny maha mpanakanto mpanjakavavin’ny salegy azy.
Sarimihetsika Malagasy Nalefa tetsy amin’ny Cinepax ny « voatsinampin’ny fanantenana »
Tontosa omaly tetsy amin’ny Cinepax Tana Water Front Ambodivona ny fandefasana tamina fimaso lehibe na “projection”, hoy isika, ilay sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe “Graines d’espoir”
Tsy misy zavatra mandeha intsony Mamofompofona “veloma Rajoelina…”
Tsy finiavana hitsikera na hisintona lakolosy fa latsaka an-davaka tanteraka ny firenena. Mampikaikaika ny zava-drehetra: delestazy lavareny, vidim-piainana mampikolay, fitsaram-bahoaka manomboka tsy voafehy,
Faritra Vakinankaratra Miha mahazo vahana ny Bajaj
Teo amin’ny 2 taona teo ho eo izay no tena niditra tao amin’ny renivohitr’i Vakinankaratra, izany hoe Antsirabe, ny Bajaj.
Paolo Raholinarivo “Mandalo ny fahefana ka lanjalanjao ihany izay atao e!”
Nanaitra ny fanehoan-kevitr’Atoa Paolo Raholinarivo tao amin’ny tambajotran-tserasera omaly momba ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM.
Sannie, 21 taona Novonoina noho ny lonilonim-pitiavana ?
Ny vatana mangatsiakan’i Sannie Raharimiantsa sisa hitan’ny fianankaviany omaly 16 jona tokony ho tamin’ny 2ora sy sasany maraina.
Fampiakarana vidin-tsolika 2300 Ar isaky ny litatra, hotsinjaraina in-droa…
Tsy maintsy hiakatra ny vidin-tsolika. Efa nisy ny resaka nivoaka fa fiakarana 9000 hatramin’ny 10 000 Ar avy hatrany no hamarotana ny iray litatra takian’ireo orinasa mpaninjara solika.
Ben’ny tanànan’i Talatamaty Hanampy tosika ireo tantsaha mpamokatra ao aminy
Ny sehatry famokarana no lalana iray hahafahana mampandroso ny firenena. Voakasik’izany manokana ireo tantsaha mpamboly sy mpiomby izay mahatratra 80% manerana ny Nosy raha 60%
Manomboka mitroatra ny olona Mba hidina ve ny faktioran’ny Jirama ?
Roa ka hatramin’ny 6ora isan’andro ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo Renivohitra. Misy aza mahatratra hatrany amin’ny adin’ny 10, ao ny milaza fa 2 ora ihany ny jirony no mandeha ao anatin’ny iray andro,…
Fanomezana fetin’ny ray Hisy toro-hevitra omena ireo manana olana ara-pananahana
Betsaka ireo mpivady manana olana amin’ny resaka fananahana ao anatin’ny tokantrano. Voakasik’izany manokana ny lehilahy toy ireo tsy mahavelona filahiana….
Taorian-dry Badoda Karohina noho ny fandrahonana olona i Tatandraza
Feno ny fepetra hisamborana an'ingahy Marc Tatandraza noho ireo heloka maro sosona nataony tao anatin'ilay horonan-tsary naparitany 2 andro lasa izay.
Fetim-pirenena 26 jona Hiasa hatramin’ny 11 ora alina ireo Taxibe
Saika manana fandaharam-potoana hitondra ny ankohonany hivoaka avokoa ny ankamaroan’ny isan-tokantrano ny alin’ny 25 jona sy ny 26 Jona ho avy izao mba hanao arendrina sy hijery afomanga.
Ambohijatovo Lehilahy 58 taona, tratra nangaro-paosy
Lehilahy iray efa 58 taona no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny UIR ( Unité d’intervention Rapide) ary natolotra ny SUT (Sureté Urbaine de Tana(SUT) afak’omaly alarobia 15 Jona.
TENY GASY Ny Jesoita sy Madagasikara : Toko 3 (1869-1895)
Ny Tantaran’i Madagasikara heverintsika eto dia faranana hatreo amin’ny «Faha Tany Gasy», izany hoe mialoha ny 1896, nahalasa zana-tany ny Nosy anivon’ny riaka.